Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Xiddigta Safarka ee Dumarka Tansaaniya ku faraxsan
Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Xiddigga safarka Zainab Ansell
Marwo Zainab Ansell, oo ah haweeneey dalxiis aad u dheer leh, ayaa lagu soo daray madaxda sare ee Tansaaniya kuwaas oo si wanaagsan uga dhex muuqday asxaabta adduunka shirkadaha dhexdooda intii uu socday masiibada COVID-19.
Ms. Ansell ayaa u soo baxday inay tahay haweenayda kaliya ee fulisa hawsha dalxiiska oo balaayiin doolar ku jirta liiska 100 maamule ee ugu wax-ku-oolka badan Tansaaniya sannadka 2021-ka.
Waxaa aqoonsaday shirkad maareyn, Eastern Star Consulting Group Tanzania.
Madaxda ugu sareysa 100-ka agaasime ayaa la aqoonsan doonaa Oktoobar 8-deeda, iyagoo door muhiim ah ka ciyaaraya awood u siinta dhaqaalaha dalka inuu dib u soo laabto wixii ka dambeeyay qalalaasaha COVID-19.
“Marwo Zainab Ansell waa mid ka mid ah hawl -wadeennada haweenka ee ololahan leh. Waxay si guul leh u maareysay meheradeedii iyada oo loo marayo duufaannada faafa ee COVID-19; waxay u qalantaa in si heer sare ah loo soo dhaweeyo, ”ayuu yiri Sargaal sare oo ka tirsan Kooxda Bariga Star Consulting Group Tansaaniya, Mr. Allex Shayo.
Abaal marinta ugu saraysa ee 100 -ka Maamuleyaasha waxay raadinayaan inay aqoonsadaan oo u dabaaldegaan maamulayaasha shaqsiga ah, waxay qadarinayaan kaalintooda gaarka ah ee ay ku leeyihiin dhaqaalaha dalka, dhiirigeliyaan hal -abuurka, iyo inay horumariyaan waxqabadka guud ee dunida shirkadaha.
Runtii, Tansaaniya waxaa ku dhacay hoos u dhac dhaqaale, iyada oo ay ugu wacan tahay mowjad bahalnimo ah oo ah coronavirus oo ku riixday tiro aad u badan oo meherado ah inay xiraan dukaammada, oo malaayiin qof u horseeday saboolnimo. Laakiin markay taasi dhacdo, Marwo Saynab waxay la timid baakado kala duwan oo hal abuur leh si ay u soo jiidato dalxiisayaasha gudaha, malaha suuq bikro ah oo la illaaway, si ay shirkadeeda uga badbaado dhibaatada daran ee COVID-19. Hal -abuurnimadeeda iyo hannaankeeda ganacsi ee waara ayaa shaqooyinkii sii nooleeyay oo la dagaallamay isbeddelka cimilada, sidoo kale waxay kor u qaadday oo saamayn ku yeelatay boqollaal haween ah oo la takooray oo ka mid ah bulshooyinka martigeliya dalxiiska Tansaaniya.
Marwo Saynab waa aasaasaha iyo maamulaha shirkadda fadhigeedu yahay Tanzania Safarada Zara, oo la aasaasay lana aasaasay sannadkii 1986 -kii Moshi, gobolka Kilimanjaro, iyada oo keligeed halgan ugu jirta sidii ay wax uga qaban lahayd caddaalad -darrada taariikhiga ah oo ay ku biirtay dulmiga iyo dhiig -miirashada loo geysto haweenka ku nool Waqooyiga Maasai ee beesha Tansaaniya.
Waxaa lagu ammaanay inay samaysay daaqad gaar ah oo ay ku caawisay haweenka Maasai ee danyarta ah dadaalkeedii ahaa inay ka xoreyso saboolnimada, xushmada silsiladaha waxyeellada leh ee caadooyinkooda dhaqameed, iyada oo dhaqaale ahaan awood u siisay inay iibsadaan alaabta ceeriin ee samaynta kuulyada iyo farsamooyinka iyo iibinta alaabta dalxiisayaasha.
Iyada oo loo marayo xarunteeda horumarinta haweenka, boqolaal haween Maasai ah ayaa ka faa'iideysta warshadaha dalxiiska, maadaama ay siinayso fursad ay ku soo bandhigaan oo ku iibiyaan alaab gacmeedyo waddooyinka marinnada loo aado goobaha dalxiiska ee ugu caansan Tansaaniya. Hindisahan ayaa koray si uu tiir adag ugu noqdo haweenka iyo guud ahaan bulshada martida loo yahay.
Sannadkii 2009, shirkaddu waxay billowday Zara Charity, oo dib ugu celineysa bulshooyinka la hayb sooco ee Tansaaniya waxayna raadkeeda ku sameysay dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee horumarinta dalxiiska waara. Sadaqadu waxay wax ka qabataa daryeelka caafimaadka, waxbarashada, shaqo la'aanta, iyo caqabadaha haweenka iyo carruurta. Zara waxay saameyn ku yeelatay kumanaan qof oo ku nool Tansaaniya, iyadoo si toos ah u shaqaaleysiisay 1,410 qof oo joogto ah iyo mid xilliyeedba, taasoo sii wadday kumanaan qoys oo ku nool waddan ay aad ugu badan tahay shaqo la'aanta.
Zara ayaa sidoo kale si weyn loogu aqoonsaday dadaalkeeda ku aaddan kor u qaadista Horumarinta Dalxiiska waarta ee Afrika, iyadoo Saynab ay ku guuleysatay abaalmarino badan, iyadoo heshay in ka badan 13 abaalmarin oo maxalli ah iyo kuwo caalami ah. Waxaa ka mid ah Abaalmarinta Bani'aadamnimada Adduunka (WTM) Abaalmarinta Bani'aadamnimada iyo Abaalmarinta Ganacsadaha Sanadka (2012), Dalxiiska caanka ah ee Abaalmarinta Mustaqbalka (2015), iyo Socdaalka Afrika ee ugu sarreeya 100. Marwo Saynab waxaa loo aqoonsaday oo lagu abaalmariyay inay tahay Haweenka ugu Saamaynta Badan Ganacsiga iyo Dawladnimada Agaasimaha Guud ee Global guulaha ay ka gaadhay Bariga Afrika ee Dalxiiska iyo Waaxda Fasaxa 2018/2019 intii lagu jiray Maamulaha Guud ee GLOBAL Pan African Awards, iyo Beeraha Qaranka Tansaaniya ayaa sidoo kale aqoonsaday Zara Safarrada oo ah Waddanka Bariga Afrika ugu Wanaagsan (2019).
Ururka Tansaaniya ee Howlwadeenada Dalxiis (TATO) Maamulaha guud, Mr. Sirili Akko, ayaa sheegay in ururkiisu uu ku faano aasaasaha iyo agaasimaha Zara Tours qalbigeeda deeqsinimada leh si uu u taageero dadka danyarta ah.
Stanley kwai wuxuu leeyahay,
September 30, 2021 at 04: 53
Mama Zara waxay mudan tahay inay guulaysato..waxay siyaabo kala duwan bulshada u caawinaysay
Zainab wuxuu leeyahay,
September 29, 2021 at 14: 23
Alice Ephata wuxuu leeyahay,
September 29, 2021 at 13: 15
Zara Tours waa dhiirrigelinta adduunka Dalxiiska. In kasta oo ay jirto masiibada faafa waxay madaxeeda kor u taagtay, maxay tahay haweeney xoog badan oo awood badan.
Mama Zainab waxay u qalantaa inay ku guuleysato tartanka Weyn waxaan ula jeedaa Weyn !!!
Hery Choga wuxuu leeyahay,
September 29, 2021 at 13: 06
Hambalyo badan adiga hooyo, waad u qalantaa tan. Waxaan si dhab ah u bogaadinaynaa dadaalkaaga.
Dorothy wuxuu leeyahay,
September 29, 2021 at 12: 58
Haddii hooyadan aysan ahayn guuleystaha, waxaan la yaabanahay yaa kale oo noqon doona. U codee mama Zara maanta oo u oggolow inay aad u dhiirrigeliso adduunka oo dhan💫. Mama Zara Adduunka 💫💫💫
Maisha k. Francis wuxuu leeyahay,
September 29, 2021 at 09: 28
Meesha aad ka hadlayso safarrada Zara, waxaad ka hadlaysaa shirkad dalxiis oo weyn oo aad u weyn oo ku taal Tansaaniya iyo dhammaan bariga Afrika. Zainabu Ansell oo ah agaasimaha maamulka waa haweeney xoog iyo awood leh. hubaal, waxay mudan tahay inay ku guuleysato tartanka
Inno Mtui wuxuu leeyahay,
September 29, 2021 at 08: 14
In kasta oo ay jirto masiibada waxay awoodday inay shaqo siiso Hagaha Dalxiiska, dheryasameeyaha iyo xirfado kale oo badan. Hambalyo Mama Zara
Hosea wuxuu leeyahay,
September 29, 2021 at 08: 11
Waxay aad u taageertay bulshada ku xeeran dhammaan agagaarkeeda. Runtii way u qalantaa inay meel sare ka gasho
Zakiah chomboo wuxuu leeyahay,
September 29, 2021 at 06: 53
Zainab Ansell waa inay ku guuleysataa tartanka maxaa yeelay xeradu aad bay u wanaagsan tahay booqashooyinka Zara sidoo kale waxay caawiyaan samafalka